Abdisamad Ali Shire, Ilkajiir Iyo C/laahi Carays Oo Garoowe Ka Baxay Dagaalkana Ku Biiray Iyo Faroole Oo Itoobiya u Yeertay. | Halganka Online
Abdisamad Ali Shire, Ilkajiir Iyo C/laahi Carays Oo Garoowe Ka Baxay Dagaalkana Ku Biiray Iyo Faroole Oo Itoobiya u Yeertay.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya caasumadda Garoowe ee maamulka Faroole ayaa sheega in madaxweyna ku xigeenka Puntland C/Samad Cali Shire, C/laahi Carays iyo Ilkajiir ay ka baxeen magaalada Garoowe.
Waxaa la sheegay in ay wataan dhowr baabuur oo tiknikaa; ma jiraan wax waan waan ah, Faroolana dab ayuu ku sii shiday. Ilaa hadda beesha Warsangali ayaan ka hadlin dagaalada Galgala.
Madaxda maamulka ayaa go’aan ku gaaray in ay dagaal wax ku xaliyaan. Dhinaca kale Faroole oo saxaafadda maxaligaa ka hadlayey ayaa sheegay in loo baahan yahay in waddamada dariskaa aysan fiirsan jabka ciidamadiisa loo gaystay wuxuuna sheegay sida ay xarakaatka islaamigaa ugu ekaan waayeen Koonfurta Soomaliya ayeysan Puntland na ugu ekaanaynin isagoo kooxahaas ku sheegtay khatar caalamiya, marka yaan nala ku fiirsan ayuu yiri Faroole.
Dowladda Itoobiya oo raadinaysay si ay ku galaan ciidamadeedu Puntland si ay u arkaan dekadda Boosaaso iyo meesha ugu dambaysa goballada Bari ayuu Faroole u gacan haatiyey. Masuuliyadda ciidamada Itoobiya haddii ay gasho Puntland waxaa qaadaya saraakiisha ugu sarsaraysa Puntland ee calooshood-u-shaqaystayaasha ah.
Siyaasiyiin badan ayaa tilmaamayaa in ay hayd Faroole inuu cayriyo oo casilo wasiirrada ka soo jeeda Galgala iyo xildhibaanada kuna baddelo beelaha Galgala ee qaatay Shareecada Islaamka farahana ka qaado si ay iskugu xukumaan waxay rabaan. Faroole ayaa ku guulaystay inuu ku laayo magac argagaxiso dadkii doortay, waxaana la sugayaa mustaqbalka dhow Qardho, Boosaaso iyo Gaalkacyo oo lagu laayo magac Argagaxiso.
Faroole hadalkiisa si aad u dhagaysato:
Halkaan Riix Ama Guji
Dagaalka maantay ayaa lagu jabiyey ciidamada Puntland waxayna ku tilmaameen in la gaaday. Warar Somalimidnimo.com ku soo dhacaya ayaa sheegaya in Faroole amar ku bixiyey in la xirxiro odayaal ka soo jeeda beesha Warsangali oo ku sugnaa magaalada Boosaaso kuwaas oo uu ku sheegay in uu maxaabiis dagaal ku qabtay. Warkaasna sal iyo raad ma lahan; mana jirto cid uu dagaalka ku qabtay hase yeeshee waxaa ka socda magaalada Boosaaso baaritaan lagu baarayo guryaha beelaha ka soo jeeda Galgala.
Waxaa la hubaa in aysan ciidamada Puntland aysan gali karin Galgala waxaana horay ugu fashilmay Cadde muuse, waxaase markasta la filan karaa weerar ka yimaada dhinaca Sheikh Mohamex Saciid Atom Xafidahulaah. Saakay aroornimadii ayuu laba waji ama laba qaybood ka weeraray ciidamada PIS ta waxaana ku dhacday kabtay ma aragtay. Baabuur dagaal waa laga gubay, gaari rasaas saarnaydna waa la qabsaday iyo weliba booyad iyo hub kale.
Sidoo kale waxaa la la’yahay saraakiil loona maleynayo inay ka kaxaysteen ciidamada sheekh Maxamed Saciid tuulada Laag iyo Karin oo ah meelaha dagaaladu ka dhaceen saakay aroornimadii.
Shacabka reer Boosaaso oo maqlayey dhawaaqa xabadda ayaa u diyaar garoobay si ay uga sifeeyaan Boosaaso maleeshiyaadk Ashahaada-la-dirirkaa ee Faroole sidii ay Claahi Yusuf uga saareen oo kale. Taasna waxaad mooddaa in maamulka Faroole ka hortagayo kaddib cagajuglayn iyo xarg lagu boobay shacabka reer Boosaaso.
Wixii warar ee ka soo kordha kala soco Somalimidnimo.com.
« Dagaallo goos goos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Boondheere iyo Gaari Gaashaaman oo laga gubay. Warbixin goobihii dagaalka ee maanta iyo Mujaahidiinta oo dhul hor leh la wareegay. »